taxi.flughafen April 6, 2017 April 6, 2017 Uncategorized Enweghị ihe ọ bụla ọzọ
taxi.flughafen March 9, 2017 March 16, 2017 Basel, ọdụ ụgbọ Shuttle, limousine ọrụ Enweghị ihe ọ bụla ọzọ
taxi.flughafen Januar 23, 2017 Januar 23, 2017 Uncategorized Enweghị ihe ọ bụla ọzọ
Ọkachamara - EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg E nwere ezigbo ihe mere anyị ga eji eji ụgbọelu na-ebufe Beel - mana mbụ anyị nwere ihe ọmụma banyere ọdụ ụgbọ elu anyị: Ọdụ ụgbọ elu anyị dị na Basel abụghị naanị linchpin maka ọtụtụ ụgbọ elu n'ụwa dum, kamakwa ọdụ ụgbọ mmiri ụfọdụ atụmatụ dị ịtụnanya. Kemgbe 1987, ọdụ ụgbọ elu ahụ nyere aha mara mma "EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg" - na ezi ihe kpatara ya, n'ihi na ebe a na Basel bụ ọdụ ụgbọ elu nke ụwa na-adabere n'ókèala nke ala abụọ. Switzerland na France na-arụkọ ụgbọ elu ọnụ. Na mgbe Switzerland 2009 na
taxi.flughafen Januar 8, 2017 Januar 8, 2017 ọdụ ụgbọ Shuttle Enweghị ihe ọ bụla ọzọ
Ọrụ Limousine na-enweghị ókèala
Car ọrụ ọkwọ Anyị chọrọ ime ka ị na-na ọnụnọ gị na Switzerland maka a ọma na nanị ahụmahụ. Limousines anyị na-enye Mercedes Benz nkasi obi dị elu. Anyị enyi na enyi na uche diraiva mmadu ga eburu gị site limousine gị oke gị ọpụpụ ebe na-ewe gị n'enweghị ihe na-na oge na ebe nke gị na njem. n'ime City gị skai eme, dị ka a nyefe n'ọdụ ụgbọ Zurich ma ọ bụ na a anya France ma ọ bụ Germany. Limousine Service maka mmefu ego price Business njem na ezinụlọ ekele anyị limousine ọrụ na mgbakwunye na anyị pụrụ ịdabere karịsịa anyị mmefu ego price. Ka anyị mara otú
taxi.flughafen Dezember 5, 2016 Dezember 5, 2016 limousine ọrụ Enweghị ihe ọ bụla ọzọ